Resadresaka nifanaovana tamin’i Kevin Scannell, mpikatroka fiteny Irlandey · Global Voices teny Malagasy
Resadresaka nifanaovana tamin'i Kevin Scannell, mpikatroka fiteny Irlandey
Hampiantrano ny kaonty Twitter @EuroDigitalLang i Kevin manomboka ny 1-7 Jona 2022
Voadika ny 08 Jona 2022 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Italiano, Español, English
Sarin'i Kevin Scannell nalain'i Maddy Scannell ary nampiasana lisansa CC BY-SA 4.0 tamin'ny alalan'ny Wikimedia Commons.
Ao anatin'ny andiany mitohy izay anasongadinatsika ny asan'ireo mpikatroka mampiroborobo ny fiteny Eoropeana vitsy an'isa sy ny tenim-paritra amin'ny habaka nomerika, tianay ny hampafantatra anareo an'i Kevin Scannell (@kscanne) izay niasa tamin'ny fampiroboroboana ny teny irlandey (na fantatra ihany koa hoe Gaelic) amin'ny alàlan'ny famolavolana rindrambaiko ho ampiasain’ny mpiteny Irlandey. Lava ihany koa ny lisitra fiaraha-miasa izay nandraisan'i Kevin anjara, izay nanampy tamin'ny fampisongadinana ny teny Irlandey an-jotra sy amin'ny media nomerika. Fantaro bebe kokoa àry ny momba ireo tetikasa ireo ao amin'ny resadresaka manaraka nifanaovana tamin’ny imailaka notontosain'ny Rising Voices.
Rising Voices (RV): Lazao anay ny momba anao sy ny asanao mifandraika amin'ny fiteny.
Kevin Scannell (KS): Profesora momba ny Siansa Informatika ao amin'ny Oniversiten'i Saint Louis any Etazonia aho, miasa amin'ny teny Irlandey. Teraka tany Etazonia tao amin'ny fianakaviana manana fiaviana Irlandey hiringiriny aho, ary nanomboka nianatra ilay fiteny tamin-kafanam-po tamin'ny taompolo 1990. Nandritra ny 20 taona mahery lasa izay no namolavolako rindrambaiko hanampiana ireo mpiteny Irlandey mba hampiasain’izy ireo ny fiteniny an-tserasera. Namolavola mpanitsy tsipelina sy fitsipi-pitenenana, rakibolana ary thesauri, milina fandikan-teny aho, ary niara-niasa tamina ekipa mpilatsaka an-tsitrapo natokana handika ireo tranonkala manan-danja sy fonosana rindrambaiko amin'ny teny Irlandey: GMail, Twitter, Firefox, LibreOffice, WhatsApp, sy ny maro hafa. Tamin'ny taona 2011 no namoronako ny tranonkalan'ny Indigenous Tweets izay manampy ireo mpiteny indizeny sy vitsy an'isa mihoatra ny 150 hifandraisana ao amin'ny Twitter.
RV: Manao ahoana ny fiteninao amin'izao fotoana izao anjotra sy ivelan-jotra?
KS: Miatrika olana maro mitovy amin'ireo teny vitsy an'isa hafa ao anatin'ny tontolon'ny fanatontoloana ny teny Irlandey manoloana ny teny Anglisy mibahan-toerana ho teny ifandraisan'ny maro. Betsaka anefa ny zavatra azo antenaina na dia eo aza ireo fanamby ireo! Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny sekoly mampiasa ny fiteny Irlandey (ampianarina amin'ny teny Irlandey ny taranja rehetra) izay omena ampiasain’ny mpianatra mihoatra ny 50.000 ao amin'ny Repoblikan'i Irlandy sy Irlandy Avaratra. Manana sata ofisialy sy miasa feno ao amin'ny Vondrona Eoropeana ilay fiteny ankehitriny. Ireo mpiteny Irlandey, na any Irlandy na any ampitan-dranomasina, dia lohalaharana amin’ny fahafahana mahazo fandaharana amin'ny onjam-peo (Raidió na Gaeltachta), fahitalavitra (TG4), ary vaovao (Tuairisc.ie, Nos.ie, sns.). Misy vondrom-piarahamonina mpampiasa ilay fiteny tena mavitrika amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy lehibe rehetra; Tiako ny manamarika fa betsaka kokoa ny fanoratana amin’ny teny Irlandey ankehitriny noho ny tamin'ny fotoana rehetra teo amin'ny tantaran'ny fiteny.
RV: Inona no antony manosika anao hahita ny fiteninao amin'ny sehatra nomerika?
KS: Tena mazoto aho amin'ny maha-mpampiasa ilay fiteny avy any am-pielezana ahy, satria saika amin'ny sehatra nomerika avokoa ny fifaneraserako amin'ilay fiteny! Izany no iray amin'ireo antony mahatonga ny tambajotra sosialy ho fitaovana mahery vaika amin'ny fampiroboroboana ny fiteny vitsy an'isa, indrindra ireo manana mpiteny mihamitombo izay monina ivelan'ny “tanindrazany” amin'ilay fiteny. Notanisaiko ihany koa ny asa nataoko tamin'ny fandikan-teny ireo rindrambaiko, fampiasa ary tranonkala ho amin'ny teny Irlandey; Mino aho fa zava-dehibe ny manome safidy ny olona hivezivezy an-tserasera amin'ny andavanandrom-piainany amin'ny teny Irlandey rehefa misy sehatra maro ao amin'ny “tontolo tena izy” izay tsy safidy ny teny Irlandey. Tsy vonona ny hitolo-batana ny sehatra nomerika ho amin’ny teny Anglisy aho!
RV: Farito ny sasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninao tsy hampiasaina feno anjotra.
KS: Vitsy dia vitsy ny fanamby ara-teknika raha ny resaka fampiasana ilay fiteny anjotra. Manana tsindrimpeo manamarika zanatsoratra lava (“síntí fada”) ny Irlandey saingy tsy sarotra ny mametraka izany ao anaty solosaina na finday hamokarana azy ireo. Mbola tsy tonga lafatra ny fidirana amin'ny aterineto haingam-pandeha, indrindra any ambanivohitra izay matanjaka indrindra ny fiteny, saingy tsara kokoa noho ny tamin’ny 10 taona lasa. Ny fanaraha-maso ny orinasa amin'ny sehatra izay itondran'ny ankamaroantsika an-tserasera ny fiainana andavan’andro (tambajotra sosialy, Google, fitaovana finday) no olana lehibe iray.
Afaka nandika ny GMail ho amin'ny teny Irlandey ny ekipanay efa ho 10 taona lasa izay, saingy tsy nomena alalana izahay handika ireo vokatra Google manan-danja hafa toa ny YouTube, Google Docs, Calendar, sns., na dia eo aza ny fahavononanay hanao izany an-tsitrapo .
Raha ny momba ny Twitter, afaka namita ny fandikan-teny Irlandey izahay ary namela izany ho an'ny vondrom-piarahamonina, saingy tsy dia “tsara vintana” ny vondrona fiteny vitsy an'isa hafa (ohatra ny Welsh=Galoà) na dia teo aza ny ezaka an-tsitrapo lehibe natao tamin’ny fandikana izany manokana.
KS: Araka ny hevitrao, inona no dingana mivaingana azo atao mba hanentanana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteninao na hanohy hampiasa azy io?
IG: Fortunately there is a new generation of Irish artists and musicians who are using the language in new and creative ways, and who have developed a huge following among younger Irish speakers. There's the group KNEECAP from Belfast with millions of views on YouTube, Séaghan Ó Súilleabháin with 180k followers on TikTok, Séamus Barra Ó Súilleabháin, Ciara Ní É, … I could go on and on.
IG: Soa ihany fa misy taranaka vaovao, mpanakanto sy mpitendry mozika Irlandey mampiasa ilay fiteny amin'ny fomba vaovao sy feno famoronana, ary nahasarika mpanjohy betsaka teo amin'ireo tanora mpiteny Irlandey. Ao ny tarika KNEECAP avy any Belfast izay nahazo mpijery an-tapitrisany tao amin'ny YouTube, Séaghan Ó Súilleabháin manana mpijery 180.000 tao amin'ny TikTok, Séamus Barra Ó Súilleabháin, Ciara Ní É, … sy ny maro hafa tsy voatanisa.
Heveriko fa zava-dehibe ny mampiseho ny tanora fa mihoatra noho ny taranja mampitaintaina any an-tsekoly ilay fiteny! Tsy dia mazava loatra izy io toy ny hoe inona no ataon’ny mpampianatra iray 52 taona any amin’ny anjerimanontolo mba hahatonga ilay fiteny hahasarika. Liana amin'ny famolavolana lalao solosaina misimisy kokoa amin'ny teny Irlandey aho.
Niara-niasa tamin'i Mícheál Ó Meachair aho tamin'ny fandikan-tenin’ny lalao finday lehibe iray taona vitsivitsy lasa izay (Gunman Taco Truck), ary Úna-Minh Kavanagh no nitarika ny fandikan-tenin’ny lalao tena mahafinaritra Among Us roa taona lasa izay, saingy maniry ny hahita safidy maro hafa kokoa ho an'ny tanora aho.